PLOS na TCC Africa Imekọrịta iji kwado Ndị Na-eme Nchoputa Africa - AfricaArXiv
bipụtara Johanssen Obanda on 19th May 2021 19th May 2021
Na AfricaArXiv, anyị ga-aga n'ihu na-ehiwe emeghe Workflows gafee mpaghara ụwa na ndị mbipụta nwere ike ịnweta, dị ọnụ ala ma baa uru nye ndị ọkà mmụta Africa niile. Anyị sonyere TCC Africa na PLOS na mbọ ha iji kwalite na ịbawanye nnabata nke nnweta emeghe na sayensị na-emeghe n'ụzọ sara mbara.
Nke a bụ ọkwa ọkwa nke TCC Africa mere maka mmekota.
The Open Access nkwusa PLOS, Na Ebe Nkuzi na Nkwukọrịta, nke sitere na Mahadum Nairobi, Kenya, (nke a maara dị ka TCC Africa) kwupụtara mmekorita iji hụ na ọdịmma na ụkpụrụ nke obodo ndị na-eme nchọpụta n'Africa na-anọchi anya n'akwụkwọ mbipụta, amụma, na ọrụ nke PLOS. Ulo oru abuo a ga aru oru onu iji muta ma mekorita uzo nke Open Research nke n’enye oru nye ndi oru nyocha nke Africa na ndi nwere oke ihe omumu banyere ihe omumu banyere ime obodo mgbe ha na echekwa isi ihe ndi Open Research.
Joy Owango, onye isi oche TCC Africa kwuru, “Nke a bụ mbido nke mmekọrịta dị ịtụnanya ga-akwado ndị nwere oke agụmakwụkwọ dị elu nabata sayensị a na-emeghe, nke ga-enye aka mee ka ha hụkwuo nyocha. "PLOS na TCC Africa nwere ebumnuche yiri nke ahụ n'ịkwado ngalaba nyocha na agụmakwụkwọ site na ịme ka ọchịchị onye kwuo uche ya kwalite site na ịnabata usoro sayensị siri ike."
“Anyị nwere oke ọ excitedụ na anyị na Joy na TCC Africa na-arụkọ ọrụ. TCC Africa bu onye ekere eke diri PLOS, dika ndi otu anyi nwere otu ebum n’uche, ”ka Roheena Anand kwuru, PLOS. "Anyị abụọ gbasoro mbọ na-aga n'ihu n'ihu na-eme omume sayensị na-abawanye na nnochite anya na nsonye nke nyocha Africa na ọkwa zuru ụwa ọnụ, mana n'ụzọ ndị emepụtara yana, ya mere na-arụ ọrụ maka, ndị obodo."
Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ na Nkwukọrịta (TCC Africa), bụ ụlọ ọrụ ọzụzụ mbụ sitere na Africa ịkụziri ndị ọkà mmụta sayensị nkà nkwurịta okwu dị irè. TCC Africa bu onyinye nturu ugo, guzosiri ike dika ndi na-achoghi ego na 2006 ma debanye aha na Kenya. TCC Africa na-enye nkwado ikike iji melite mmepụta na ọhụụ nke ndị nchọpụta site na ọzụzụ na nkwukọrịta ndị ọkà mmụta sayensị.
PLOS abughi ndi na-abaghi ​​uru, onye nkwuputa Open Access na-enye ndi oru nyocha ikike ime ka oganihu ohuru na sayensi na ogwu puta site na iweta mgbanwe na nkwurita okwu nyocha. Anyị na-emebi ókè kemgbe anyị guzobere na 2001. Akwụkwọ akụkọ PLOS kpaliri mmeghari maka OA ndị ọzọ na akwụkwọ ndebanye aha. Anyị guzobere akwụkwọ izizi gbasara ọtụtụ agụmakwụkwọ gụnyere nyocha niile magburu onwe ya n'agbanyeghị agbanyeghị ọhụụ ma ọ bụ mmetụta gosipụtara mkpa ọ dị ịnweta data emeghe. Ka Open Science na-aga n’ihu, anyị na-aga n’ihu ịnwale iji nyekwuo ohere, nhọrọ, na ọnọdụ maka ndị na-agụ ya na ndị nyocha.
Nke a mara ọkwa na mbụ e bipụtara na tcc-africa.org/plos-and-tcc-africa-partnering-to-support-african-researchers/
E gosipụtara akụkọ na PLOS na TCC Africa
Dị ka onyinye nye Ọgbọ Review izu 2020, TCC Africa na AfricaArXiv edoziwo webinar iji banye miri emi na mmepe ohuru ohuru na uzo Rapid na Open Peer Review. Ihe karịrị akwụkwọ 300 (akwụkwọ edemede na akwụkwọ akụkọ) dị n'ịntanetị na-akọwa COVID-19 Nnyocha na banyere Africa
Anyị, otu ndị na-ebipụta akwụkwọ na ndị ọrụ nkwukọrịta ndị ọkà mmụta, na-etinye aka na-arụkọ ọrụ ọnụ na onye na-ebipụta akwụkwọ na-enyocha ngwa ngwa na nyocha mbufe iji bulie arụmọrụ na ọsọ nke usoro nyocha na nyocha nke ndị ọgbọ nke nyocha COVID-19.
Categories:	ọkwaNjikọ Aka
Tags: imegheemeghe sayensịPLOSebipụtaTCC Africa
Categories Họrọ Atiya Nkwupụta (11) Ike Owuwu (7) Mmekota (27) EGO-19 (31) Omume (6) Izugbe (9) Akụrụngwa (1) Amaala obodo (2) Ajụjụ ọnụ (8) Asụsụ dị iche iche (7) Meghee oghere (36) Sayensị Na-emeghe (16) Mgbasa ozi mmekọrịta (2) Nyocha ndị ọgbọ (7) Podcast (1) Mbido (11) Mbipụta (14) Akuko (1) Nkwukọrịta sayensị (17) Nkwenye (7)
AfricanResearch AI Amamịghe echiche ASAPbio Ndabere BlackBay NwaigweXNUMX Center maka Open Science nkata Covid-19 DialogShift Ihe Dijitalụ Nchọpụta Nchoputa nke nyocha Africa Eider Africa Ego Joy Owango Mahadum Omdurman Islamic oghere imeghe Mepee Mepee Ihe Ọmụma emeghe kwa nyochaa emeghe sayensị Mepee Sayensị Sayensị OSF Nyocha ndị ọgbọ akwusila Nyocha ebipụta Bipụta nyochaa ngwa ngwa Ntughari Research Roadmap Nkwurita Ozi Nkwukọrịta Sayensị ScienceOpen SDG2 Sudan Ebumnuche ndị nwere ike ịzụlite tcc-africa TCC Africa translation Uganda Agụụ Zero
Ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha, ikekwe ị maara usoro ndụ nyocha na nsogbu niile na ohere ndị ọzọ. Ọ bụ ozi ọma ma ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha si Sub-Sahara Africa GỤKWUO…